Apple Watch iyo Waxqabad, furayaasha fahamkiisa | Wararka IPhone
Luis Padilla | | Apple Watch, Casharrada iyo buugaagta
Apple Watch wuxuu ahaa boqorka dukaamaysiga ciida masiixiga maadaama aan awood u yeelanay inaan ka aqrino warbixinada qaar falanqeeyayaasha in kabadan 5 milyan oo unug. Moodooyinka cusub, hoos u dhaca qiimaha marka la barbardhigo soo saarista qaabkii asalka ahaa, kala duwanaanshaha ballaaran ee midabada, midabada iyo xargaha ... Shaki la'aan wuxuu noqday tixraaca smartwatches iyo isticmaaleyaal badan oo horay u isticmaali jiray jijin fudud oo lagu qiyaaso hadda Waxay leeyihiin go'aansaday in la isticmaalo Apple Watch, kaas oo marka lagu daro wax kasta oo jijimadooda ay qabatay ay siiso fursado badan oo dheeri ah. Laakiin waxaa jira wax layaab ku leh isticmaaleyaal badan waana habka ay Apple Watch u cabirto dhaqdhaqaaqaaga jirka. Waxaan kuu sharxeynaa furayaasha si aan u fahanno.
Waxaan ku bilaabaynaa mid ka mid ah ogeysiisyada kuwa badan xanaaqa: Istaag. Runtii waa talo horeyba dhowr sano u jirtay oo ay taageerayaan daraasado cilmiyaysan oo fara badan. Socodka ilaa 5 daqiiqo saacad kasta waa caafimaad waxayna ka hortageysaa cudurada dheef-shiid kiimikaadka sida sonkorowga. Laakiin waxaa laga yaabaa in dhibaatadu ku jirto ogeysiiska Apple: Maaha inaad istaagto laakiin waa inaad sameysid waxqabad saacad kasta, haa, uguyar. Ogeysiinta sidoo kale waxay imaaneysaa kahor dhamaadka saacada, si loo helo barta saacadaas. Haddii aad hesho 12-ka dhibcood maalinta waxaad buuxin lahayd giraanta.
Waxaa laga yaabaa inay tahay qodobka abuuraya hubin la’aanta ugu badan. Muxuu Apple tixgeliyaa jimicsiga? Shirkaddu waxay ku qeexaysaa inay tahay waxqabad kasta oo culeys yar ku saara jirkaaga, sida socodka degdegga ah. Apple Watch sidoo kale waxay kormeertaa dhaqdhaqaaqaaga, garaaca wadnahaaga iyo Dhaqdhaqaaqa aad sameyso waa inuu saameyn ku yeesho heerka garaaca wadnahaaga Apple si ay ugu tixgeliso inay tahay jimicsi haddii kale ma tirakoobi doono. Marka sameynta waxqabad isku mid ah labo qof ayaa ku gaari kara natiijooyin kala duwan Apple Watch, iyadoo kuxiran dadaalka mid waliba uqalmayo.
Ugu dambeyntiina waxaan u nimid giraanta oo u qalanta kalooriyada aan isticmaalnay. Sidii tii hore oo kale, Apple Watch wuxuu adeegsadaa dareemayaasha dhaqdhaqaaqa iyo garaaca wadnaha si loo qiyaaso kalooriyada aad cunayso, laakiin kaliya "Kalooriyada Firfircoon". Apple wuxuu ka hadlayaa "Tamar firfircoon" si loogu tixraaco kalooriyada firfircoon ee ah kuwa la cuno marka aan sameyno jimicsi. Waxa kale oo jira "Kalandarka Aasaasiga ah" ama "Tamarta nasashada" kuwaas oo ah waxa aan u isticmaalno xaqiiqda fudud ee ku noolaanshaha iyada oo loo marayo habab muhiim ah sida neefsashada. Wadarta kalooriyada aan cunno waa natiijada wadarta labadan, laakiin giraanta dhaqdhaqaaqa ayaa kaliya loola jeedaa kuwa firfircoon.
Bartilmaameedka dhaqdhaqaaqaani waa midka kaliya ee aan wax ka beddeli karno sida aan u jecel nahayAma intii lagu jiray qaabeynta bilowga ah ee Apple Watch ama waqti kasta oo la isticmaalayo Force Touch ka dhex jira barnaamijka Waxqabadka ee saacadda. Marka lagu daro qeexitaanka yoolkayaga kalori ee aan cunno (xusuusnow inay kaliya yihiin "firfircoon") waxaan arki karnaa soo koobid todobaadle ah oo ku saabsan waxqabadkeena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Apple Watch iyo Waxqabadka, furayaasha fahamkiisa
Hadda, laakiin haddii aan doonayo inaan ordo ama socdo 30 saacadood halkii aan ka ahaan lahaa 1 daqiiqo, sidee baan ugu beddelaa taas saacadda tufaaxa?
Dukaanka Toca, waa bilaash wakhti xadidan
IPhone 8 oo leh shaashad OLED oo hufan ayaa ah fikrad kale oo gaareysa shabakadda